प्रजनन उमेर सकिएपछि आउँने समस्या र निदान डा. अरुणा उप्रेतीको,भनाई – News Nepali Dainik
प्रजनन उमेर सकिएपछि आउँने समस्या र निदान डा. अरुणा उप्रेतीको,भनाई
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०२, २०७७ समय: २१:४९:५६
प्रजनन उमेर सकिदै जादा महिलाहरुमा धेरै खाले समस्याहरु बल्झिदै जान्छन् । ती समस्यामध्ये मुटुको रोग र हाडको समस्या प्रमुख हो ।
३५ वर्ष काटेपछि महिलाको शरीरमा हर्मोनको मात्रा कम हुँदै जान्छ । शरीरमा हर्मोनको मात्रा कम हुँदै गएपछि हाडहरूको घनत्व कम हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट हेर्दा खासै समस्या देखिँदैन । तर, ४५– ५० वर्षकी महिलाको शरीरमा हाडको घनत्व कम हुने हुँदा कतै सानो ठक्कर लाग्दा पनि हाड भाँचिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
भ्रूणलाई बढ्न चाहिने क्याल्सियम आमाको रगतमा पुगेन भने भ्रूणले हाडमा रहेको क्याल्सियमबाट भोजन बनाएर लिन्छ। यसरी हाडमा रहेको क्याल्सियम भू्रणले लिएपछि आमाको हाड कमजोर हुँदै जान्छ । गाउँघरमा महिलाहरूले धेरै बच्चा पाउने हुनाले ३५–४० वर्ष नपुग्दै महिलाको हाड कमजोर भइसक्छ ।
Last Updated on: February 14th, 2021 at 9:49 pm